Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Healthcare, Beauty Care အလုပ်အကိုင်များ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, အလှအပရေးရာ Jobs in Myanmar
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, အလှအပရေးရာ အလုပ် 25 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေးရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, အလှအပရေးရာ ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများကို Alote Myanmar တွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
Pharmacist (Or) Junior Pharmacist
ဆေးရောင်းသူ | Pharmacist
Hospital Pharmacy အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ Computer အခြေခံအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး၊အသင်းအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။ နေ့/ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
LCCI Level (3) အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ တစ်နှစ်ခွဲ ရှိရမည်။ Computer Word,Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
- Making appointments and regular call visit to new and existing customers - Carry out Modern Trade Channel’s sale process daily and carry out necessary actions as required; develop target list of new customers and front-line relationship with key customer accounts - Effectively implement marketing program - Implement sale strategies to achieve growth and hitting sales targets - Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs - Find new customer and build strong relationship to maximize sales - Prepare daily, weekly and monthly schedule - Regular and timely reporting of daily, weekly and monthly report
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူ | Healthcare Assistant
Moc Moc Beauty and Aesthetic Clinic
- အချိန်ပြည့်တာ၀န်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ၊ ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - စကား‌ပြောပြေပြစ်ရမည်။ - ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းရပါမည်။ - ယခုယာယီအလုပ်ချိန်(9:00Am to 5:00Pm) - ပိတ်ရက်မှာအလှည့်ကျ တစ်ပါတ်တစ်ရက်ပိတ်ပါသည်။
AGTI, ITC, THS Mechanical, EP, EC စက်ကိရိယာများနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီး စက်များအကြောင်းကို ကျွမ်းကျင်စွာနားလည်ပြီး ကိုင်တွင်ပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကျွမ်းကျင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာ (MS Word,Excel) အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
ရောင်းရနိုင်ခြေရှိသော sales လုပ်ဆောင်ချက်များ ဆောင်ရွက်ရန် ကုမ္ပဏီမူဝါဒအတိုင်း အရောင်းနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြုလုပ်ရန်နှင့် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို အမြဲတမ်း udpating ပြုလုပ်ရမည်။ ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်များအကြောင်း တင်ပြရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်းနှင့် တင်ပြခြင်း ရောင်းရရန် အလားအလာကောင်းရှိသူများအား စနစ်တကျ ပိုက်လိုင်းဆောက် ထိန်းသိမ်းထားခြင်း။ ရောင်းအားကောင်းလုပ် အခြားအဖွဲ့၀င်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ခြင်း။ -Prospect and qualify new sales leads - Track all sales activities in company policy and keep current by udpating account information regularly -Create, plan, and deliever presentations on company products - Maintainawell-developed pipeline of prospects - Coordinate with other team members and departments to optimize the sales effort - Updated Price policy with Customer once company announced. - Effort to Target Achievement
အကျိုးအမြတ်: Bonus + Attendance + Ferry
 အခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ရှိရမည်။  ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူူဖြစ်ရမည်။  ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့်အလုပ်လုပ်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။  နေ့/ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
 အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင် (သို့) တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။  လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။  လူနာများအပေါ်တွင်ကြင်နာယုယစွာ ဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။  ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့်အလုပ်လုပ်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။
မိမိအဖွဲ့၏ တနေ့တာလုပ်ဆောင်ရမည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည် မိမိ နှင့် အသင်းတစ်သင်းလုံး၏ Sales targets များပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ရမည် အသင်းတစ်သင်းလုံး လုပ်ဆောင်ရမည်တို့ အဆင်ပြေစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည် အသင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားစေရန် လိုအပ်သော သင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ပေးရမည် - Responsibility for the day to day activities of your team - Meet your targets and those of the team asawhole - Assist in the smooth running of the of the section and its team - Contribute to training and development of the team -Assist Line Manager to recruitment of team members, subject to agreed criteria - Assist Sales Manager/ Supervisor to train and appraise individual team members to ensure targets are met - Performance and development of team members - Reporting to Sales Supervisor
အကျိုးအမြတ်: Bonus + Attendance + Incentive + Ferry
ယာဉ်မောင်း ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည် နယ်ဝေးခရီး သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည် မော်တော် ယာဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး နှံ့စပ်သူဖြစ်ရမည် သန့်ရှင်း သပ်ရပ်စွာနေထိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်အတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်သို့မဟုတ် ၂ နှစ်ရှိသူ ဦး စားပေးမည်။ ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ စကား‌ပြောပြေပြစ်ရမည်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းရပါမည်။
သူနာပြု | Nurse
- အချိန်ပြည့်တာ၀န်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ၊ ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅ မှ ၃၀ နှစ်အတွင်း)။ - စကား‌ပြောပြေပြစ်ရမည်။ - ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းရပါမည်။ - ယခုယာယီအလုပ်ချိန်(9:00Am to 5:00Pm) - ပိတ်ရက်မှာအလှည့်ကျ တစ်ပါတ်တစ်ရက်ပိတ်ပါသည်။
- တမြို့လုံးရှိ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများ. နှင့် WholeSales ဆိုင်များ Retail ဆိုင်များအားလုံးကို ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်နေရမည်။ - အရောင်း Target ကို ပြည့်မှီအောင် ဖော်ဆောင် ပေး နိုင်ရမည်။. - Reporting များ ကို ကောင်းမွန်စွာ တင်ပြနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
- Offline နှင့် Online Live Sales ပါ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် - လိုအပ်ပါက ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည် - Social Media အသုံးပြ၍ ပို့စ်တင်ခြင်းနှင့် Customer များသို့ စိတ်ရှည်၊လျင်မြန်စွာ ဆက်သွယ်ပေးနိုင်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: - စားစရိတ်(သို့)ခရီးစရိတ် - လိုအပ်ပါက နေစရာအဆောင်စီစဥ်ပေးသည်
တင်သောနေ့: 20 Oct 2021